State Counsellor receives Secretary-General of ASEAN – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, received Dato Lim Jock Hoi, Secretary-General of ASEAN, at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw at4p.m. on 27 May 2019.
During the meeting, they exchanged views on the recent developments in Rakhine State and on the possible areas of collaboration between Myanmar and ASEAN in resolving the humanitarian situation, as well as the outcomes and implementation of the recommendations of Preliminary Needs Assessment conducted by the ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ASEAN ERAT) comprising members from selected ASEAN member states, the AHA Centre and the ASEAN Secretariat.
Present at the meeting were U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, and senior officials from the Ministry of Foreign Affairs.
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒါတိုလင်ကျောက်ဟွိုင်အား ၂၇-၅-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၆၀ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နယ်ပယ်များ၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေးအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ AHA Centre နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် အာဆီယံအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (ASEAN-ERAT) က ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကနဦးလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း (Preliminary Needs Assessment) ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့် ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။